Khayre Oo La Kulmay Lana Dardaarmay Saraakiil Boolis Ah Iyo Madaxda Gobolka Banaadir – Heemaal News Network
Khayre Oo La Kulmay Lana Dardaarmay Saraakiil Boolis Ah Iyo Madaxda Gobolka Banaadir
April 15, 2018 Wararka Af Soomaliga Ah
Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay kulan la qaatay Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir iyo taliyeyaasha booliska, iyadoo kulankaasi ay goob joog ahaayeen Guddoomiyaha Gobolka Banaadir C/raxmaan Cumar Cismaan Yarisow iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/Guuto Bashiir Cabdi Maxamed.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo hadal dheer ka jeediyey kulanka ayaa ka hadlay ahmiyadda amniga Muqdisho, ilaalinta hantida Ummadda iyo sare u qaadista kalsoonida shacabka, isagoo sheegay iney si dhab ah la iskula xisaabtami doono haddii ay timaado dulduleelo xagga amniga ah.
Waxaa uu sheegay in degmadii ay ka dhacaan falal amaan daro lala xisaabtami doono, masuuliyiinta iyo saraakiisha ka howgasha, isagoo xusay in qofkii waajibaadkiisa gudan waaya uu shaqada waayi doono.
“Runtii maalin dhaweyd Madaxweynaha waad la kulanteen, wuxuuna idiin sheegay in uusan ku qanacsaneyn Shaqadiina, waxaana la idinka rabaa inaad dardargelisaaan,runtii Guddoomiye Yariisow waxaa laga rabaa inuu Shaqada uu ka ceyriyo guddoomiyihii Shaqaysan waayo iyo Askarigii qalad gala ama anaga ay noo soo sheegaan” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Xasan Cali Kheyre, ayaa sidoo kale sheegay in Xukuumadda ay ku dadaali doonto taageeridda laamaha Ammaanka, waxaana uu ku boggaadiyey shaqada adag ee Habeen iyo maalin ay u hayaan Ummadda Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaaladda Muqdisho Mudane C/raxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa isna sheegay in wada shaqeynta Shacabka, Maamulka Banaadir iyo hay’adaha amnigu uu yahay mid aad u sareeya taasina ay keentay guulo amni.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye guuto Bashiir Cabdi Maxamed ayaa isna sheegay in Taliska Booliska uu kordhiyey howlgalada Amaanka lagu sugayo, isaggoo tilmaamay in loo baahan yahay wada shaqeyn buuxda inay yeeshaan Maamulada degmooyinka Gobolka Banaadir, Talisyada Saldhigyada Booliska iyo kuwa Nabad sugida.
Isla xalay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kormeeray qaybaha Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed waxaana qaybahaasi u sharaxay waxyabaha lagu qabto Taliyaha Ciidanka Booliska soomaaliyeed.
Siyaasi Cabdiqaadir Cabdishakuur Oo Laga Qaaday Xayiraadii Dhinaca Safarka
Uur-cade Oo Ganafka Ku Dhiftay Xilka Qaadistii Lagu Sameeyay
Daawo Tacadiyada & Dhibaatooyinka loo Gaysto Wariyayaasha ka Hawl-gala Magalada Muqdisho.
Xildhibaanad Goor dhowayd Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Kooxo ku hubaysnaa bastoolado ayaa goor dhow oo fiidnimadii caawa ah waxay xaafadda Maanabooliyo ee degmada Shibis ku toogteen Xildhibaanad ka tirsaneyd Baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dilka Xildhibaanad Ruqiyo Abshir Gabbane ayaa waxaa […]
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta war-murtiyeed ka soo saartay collaadaha ka soo aloosan deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool, waxayna xukuumadu ku baaqday in dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Tukaraq ay si deg deg ah oo shuruud […]